एक महिला भएर लेखन क्षेत्रमा उभिदाँ के कस्ता परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो? - सजिलो पाटी
२०७७ कार्तिक २२, शनिबार १३:४३
लेखक तथा अधिवक्ता सरु अर्याल लेखन कार्यमा सक्रिय छिन्। उनको बि एन पुस्तक संसारबाट ‘विस्मरण’ उपन्यास प्रकाशित छ। आज ‘लेखकलाई १० प्रश्न’ साहित्यिक स्तम्भको अंक ०९ मा सजिलोपाटीका प्रधान सम्पादक सुरज बराकोटीले उनीसँग गरेका कुराकानी यस्तो छ:
म शैक्षिक क्षेत्रमा कलेजतिर केहि समय दिने गरेकी छु। त्यसको साथसाथै आफ्ना दैनिकको कार्य, अलिअलि लेखन यस्तैमा ब्यस्त छु ।
फुर्सदको समय प्रायः किताब पढ्न रुचाउछु । साहित्यको कुरा गर्दा मलाई नेपाली र अंग्रजी भन्नुभन्दा पनी बजारमा आएका पुस्तक आफ्नो अनुकुल वा चर्चामा रहेका पुस्तक पढ्ने हुनाले दुबैमा मेरो श्रद्धा छ । तर मेरो तुलानात्मक रुपमा नेपाली साहित्यप्रति बढी अभिरुचि छ।
३. अहिले सम्म मनपरेको कुनै एउटा किताबको नाम लिनुपर्दा कुन किताबको नाम लिनुहुन्छ?
सबै पुस्तकका आ–आफ्नै महत्व रहेका हुन्छन् । कतिपय राम्रा पुस्तक मैले पढ्न बाँकी नै हुनसक्छ । भन्नैपर्दा मौलिकता झल्केको सामाजिक पुस्तक योगमाया।
मैले पढेका किताब र एउटा समाजमा घट्ने बिभिन्न घटनाहरुले पनि मलाई सधै गिज्याइरहे। त्यसैले मुख्य किताब लेख्ने प्रेरणाको स्रोत नै तिनै पात्रहरु हुन् । कसैप्रति प्रभावित भएर किताब लेखेको वा लेख्नुपर्छ भन्ने हैन।
५.’विस्मरण’ को जन्म कसरी हुनपुग्यो?यो किताबबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
बिबिध घटनाहरु मेरा मानसपटलमा घुमिरहन्थे, एउटा पोख्ने माध्यम बन्यो विस्मरण । कतिपय कुरा छताछुल्ल नपारेसम्म मन शान्त हुन्न रहेछ । न्याय नपाएजसरी मन गुम्स्याउनु भन्दा पुस्तक मार्फत नै मैले केहि सामाजिक घटना समेट्ने जमर्को गरें जसको फलस्वरुप विस्मरणको जन्म भयो ।
आजसम्म जति पनि पाठक र बिद्धानहरुले पढ्नुभएको छ उहाँहरुको प्रतिक्रिया बाट बिस्मरणले खुसीको श्वास फेरेको छ । यसले युवा वर्गलाई बिषेश आकर्षण गरेको पनि छ ।
६. म पनि किताब लेख्न सक्छु भन्ने कति बेला लाग्यो ?
लेख्ने क्रममा सामाजिक बिषयबस्तु समेट्ने भएकाले सरल ढंगले प्रस्तुत गर्दै लेखन कार्य अगाडी बढाएँ । जब म लेख्दै गएँ तब मलाइ एउटा पुस्तक बन्ने जति बिषयबस्तु तयार भयो अनि म पनि किताब लेख्न सक्छु भन्ने लाग्यो । तर अझै भन्नुपर्दा लेखन कार्य जटिल छ, बिषयबस्तु छनौट र लेखन शैलीको तादम्यता नमिले पाठकको मनमा पस्न सरल छैन । मलाइ लाग्छ त्यसको लागि मेहनत र प्रयास अझै म मा निखारिनु पर्छ ।
७.मुख्य पेशा अधिवक्ताबाट साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कत्तिको कठिन महसुस गर्नुभयो?
म अधिवक्ता हुनुभन्दा पहिले बाट नै साहित्यमा रुचि भएकाले अधिवक्ताबाट साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको होइन । साहित्य मनबाट उब्जने भावनालाइ पेशाले त्येति प्रभाव पारेन पनि । बरु थप बिषयबस्तु बन्न पुग्यो मेरा लागि ।
८. एक महिला भएर लेखन क्षेत्रमा उभिदाँ के कस्ता परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो?
सायद महिला भएर भनौ वा कामको ब्यस्तता । खाना पकाउदा, लुगा धुदै गर्दा, बाटोमा गाडीमा हिड्दा सोचिएका कुरा नै लेख्नु पर्ने, लेख्नकै लागी समय छुट्याउन नसकिने भनेजति अध्ययनको दायरा छुट्याउन सकिन्न ।
९.आलोचनाबाट कत्तिको आत्तिनु हुन्छ?
आलोचना त प्रेरणा नै हो नि। आफ्नै सुधारका लागि हो भन्ने लाग्छ । तर कतिपय व्यक्ति आलोचना गर्न मात्र रुचाउनेहरु पनि हुन्छन् त्यस्तो बाट भने सर्तक रहनुपर्छ ।
१०. नयाँ पुस्तकको तयारी गर्नुपर्दा कुन बिषयको उठान गर्नुहुन्छ?
यहि भन्ने सोचेको छैन । केहि पृथक भने पक्कै उठान गर्नेछु ।